BROWSER ကိုအတွက် IP ADDRESS ကိုပြောင်းပေးပါ - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
Browser ကိုအတွက် IP address ကိုပြောင်းပေးပါ
သငျသညျကိုအခြားသူများဖို့ IP ကိုအောက်မှာမဆိုဝန်ဆောင်မှုကိုသှားဖို့လိုအပျပါကသင်သည်အများဆုံးခေတ်သစ် browser များအတွက်သင့်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအထူး extensions တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအမှုကိုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်သင်သည် plug-in / extension များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။
အမည်မဖေါ်ပြ - အထူး extensions တွေကိုဒါမှမဟုတ် browser မှာ installed ဖြစ်ကြောင်း-ins plug နှင့် IP ကို-လိပ်စာပြောင်းလဲနေတဲ့အမည်ဝှက်ပိုက်ကွန်ပေါ်တွင်သင်၏ရှေ့တော်မှောက်ပါစေ။ အိုင်ပီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြောင်းလဲနေတဲ့အင်တာနက်လမ်းကြောင်းနှင့် system အရင်းအမြစ်များအချို့ကုန်ကျစရိတ်လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကသင်ကွန်ပျူတာတုံးစတင်နိုင်ပါသည်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမကောင်းတဲ့ progruzhat ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
သင့် browser များအတွက်အမျိုးမျိုးသော extension များနှင့် plug-in ကို install သည့်အခါသတိထားပါ။ သူတို့ထဲကတချို့ကမှာအကောင်းဆုံး, မည်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပင်သင်၏ browser home page ကိုပေါ်ကြော်ငြာ၏အမြဲတမ်း display တွေစရာတွေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုးဆုံးအမှု၌, လူမှုရေးကွန်ရက်မှာအကောင့်များနှင့်ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှုများကို hack တဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Method ကို 1: Google Chrome ကိုစတိုးဆိုင်၏ Extensions
ဒီ option ကထိုကဲ့သို့သော Chrome ကို, Yandex နှင့် (အချို့ extension များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်) အော်ပရာအဖြစ် browser များအဘို့စုံလင်သည်။ ဤအခြေအနေ၌သဟဇာတမများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလက်တွေ့ကျကျဖယ်ထုတ်လိုက်သည်ကို ထောက်. က Google ထံမှသာ browser ကိုကလျှောက်ထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
IP ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်အနေနဲ့ extension ကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင် Tunnello Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး VPN ကို။ ဒါကြောင့် (အပြောင်းလဲအိုင်ပီနှင့်အတူ) အမည်မသိ mode မှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအသွားအလာအခမဲ့ gigabyte နှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ဒါဟာရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု developer များအများဆုံး optimization ၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြပြီအဖြစ်စာမကျြနှာမဆို, အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါစေပါဘူး။
က Chrome browser ကိုများအတွက် Add-ons တွေကိုစတိုးဆိုင်ကိုသွားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ browser မှာထည့်သွင်း "Google Chrome ကို Store က" နှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွင်းပထမဆုံး link ကိုသွားပါ။
ဆိုက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဘယ်ဖက်မှာသငျသညျကိုသာတပ်မက်လိုချင်သောအ extension ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာရှာဖွေလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, "Tunnello Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး VPN ကို".
ဆန့်ကျင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွင်းပထမဆုံး option ကိုတွင် button ကို click "Install".
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, သငျသညျကိုစနစ်တကျ plug-in ကို configure နှင့်၎င်း၏ website တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါလျှင်ဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်:
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, plug-in ကိုအိုင်ကွန်၏အထက်ပိုင်ခွင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ဘရောက်ဇာကိုပိတ်လိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်။ စီမံခန့်ခွဲမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ဒီ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျထိန်းချုပ်မှုတည်ရှိပါလိမ့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင် drop-down menu ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တိုင်းပြည်ရွေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ default အနေနဲ့ပြင်သစ်ကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မည်။ အများဆုံး application များအဘို့, CIS နိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသူ, ပြင်သစ်စုံလင်သည်။
စတင်ရေးသားရန်ရန်, ကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "GO".
သင်မှတ်ပုံတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိရာအရာရှိတဦးက developer ၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်လယ်ကွင်းဖြည့်ရှောင်ရှားရန်အဖြစ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးက Facebook သို့မဟုတ် Google Plus အားအတွက်အကောင့်တစ်ခုသုံးပြီးပြုမိသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အလိုရှိသောလူမှုကွန်ယက်ခလုတ်နဲ့ကလစ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
သငျသညျလူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့် input ကို load မပြုခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်စံလမ်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးစကားဝှကျကိုစဉ်းစားသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။ ကော်မရှင်စာတန်းများနဲ့လယ်ပြင်၌ပြုရပါမည် "အီးမေးလ်" နှင့် "Password ကို"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဝင်မည်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း".
ယခုသင်သည်သင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်ကိုအသုံး "အိမ် Go"လာမယ့် setting ကိုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့် web site ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်မှန်လျှင်, သင့်အီးမေးလ် box ကိုစစ်ဆေးပါ။ အထဲတွင်သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုမယ့်လင့်ခ်နှင့်အတူစာတစ်စောင်ဖြစ်ရပါမည်။ သာကတဆင့်သွားပြီးနောက်, သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီ plugin ကိုသုံးနိုင်သည်။
တဖန် browser ၏ညာဘက်ထိပ်မှာ icon ကို click လုပ်ပါ။ အဆိုပါ precipitated ပြားကြီး button ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ် "GO"။ VPN ကိုချိတ်ဆက် Allow ။
ကွန်နက်ရှင်ကနေ disconnect လုပ်ဖို့, သင်သည်နောက်တဖန်စနစ်ဗန်းကို browser extension ကိုအတွက် icon ကို click ပါဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှု panel ကို OFF button ကို click လုပ်ပါ။
Method ကို 2: Mozilla က Firefox အတွက် Proxy
ကံမကောင်းစွာပဲ Firefox ကိုအတူလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပြဿနာရှိသည်မယ်လို့ကြောင့်ငွေပေးချေမှုမလိုအပ်ပါဘူးရသောအိုင်ပီ, ပြောင်းလဲပစ်ရန် extensions တွေကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိပါကထို့ကွောငျ့, ဒီ Browser ကိုအသုံးပြုပါသောသူတို့အဘို့, ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ proxy များကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, က proxy ကိုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
Mozilla က Firefox မှာ proxy ကို configure လုပ်ပြီးအသုံးပြုဖို့အဘို့ညွှန်ကြားချက်ဒီတူ:
ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောကြောင်းလတ်ဆတ်တဲ့ proxy ကိုဒေတာတင်ဆက်ထားတဲ့ site တစ်ခုရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ proxy ကိုဒေတာလျင်မြန်စွာခေတ်မမီတော့ဖြစ်လာသည်ကတည်းကတစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Yandex သို့မဟုတ် Google) သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ တူရှာဖွေရေးဘားတစ်ခုခုသို့ Enter "လတ်ဆတ်တဲ့ Proxy" နှင့် [သတ်မှုများလျော့ချ၏ပထမဦးဆုံးအနေအထားမှာတည်ရှိပါတယ်ကြောင်းမည်သည့် site ကို select လုပ်ပါ။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကတည်ရှိခြင်းနှင့်လက်ရှိအလုပ်လိပ်စာများနေကြသည်။
အခုတော့ Mozilla က settings ကိုဖွင့်လှစ်။ ဆိုက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်အပေါ်သုံးစင်းနှင့်အတူအိုင်ကွန်ကိုသုံးပါ။ ရလဒ်ဝင်းဒိုးကိုမှာလက်မှတ်နှင့်အတူဂီယာအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Settings" ကို.
သင်တစ်ဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့ပြေးမှီ, အဆုံးမှစာမျက်နှာများဖွင် ့. Dolistayte "Proxy"။ ခလုတ်ကိုအဲဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ".
, Proxy setting တွင်, select လုပ်ပါ "လက်စွဲစာအုပ် Setup ကို"ဒါကခေါင်းစဉ်အောက်တွင်တည်ရှိသည် "အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ proxy ကိုချိန်ညှိခြင်း".
များ၏ရှေ့မှောက်၌ "HTTP proxy ကို" အူရှေ့တော်သို့ဝင်သမျှသောနံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများအရာကိုသင်ဆုံးမသွန်သင်၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း၌ရှိကြ၏မှ site ကိုရည်ညွှန်း။
အပိုင်း "ဆိပ်ကမ်း" သင် port နံပါတ်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, သူသည်အူမကြီးအပြီးညာဘက်တတ်၏။
သင် proxy ကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်လျှင်, တူညီတဲ့ပြတင်းပေါက်တစ်ဦးကို tick "No proxy" ကို.
Method ကို 3: သာလျှင်သစ်ကို Opera House များအတွက်
အော်ပရာအသုံးပြုသူဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ထားပြီး built-in browser ကိုသုံးနိုငျဖြည်းဖြည်းသို့သော်အများကြီးအလုပ်, သော VPN ကို-mode ကိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်မဆိုကန့်သတ်မထားဘူး။
အော်ပရာ၌ဤ mode ကို enable လုပ်ဖို့, ဤညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးပါ:
အသစ်တစ်ခုကို browser tab ကို, Ctrl + အတွက် ကို Ctrl + Shift + N ကို.
ဒါက window ကိုဖွင့်လှစ် "ပုဂ္ဂလိက Browsing သို့"။ လိပ်စာဘား၏လက်ဝဲဘက်အာရုံစိုက်။ လာမယ့်သေးငယ်တဲ့စာတန်းတစ်ခုမှန်ဘီလူးအိုင်ကွန်ရှိလိမ့်မည် "VPN ကို"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်ကွန်နက်ရှင် settings ကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။ , ကိုစတင်တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုရန် switch ကိုလျှောမှ "Enable".
အဆိုပါကမ္ပည်းအောက်မှာ "Virtual တည်နေရာ" ပါမယ်သင်၏ကွန်ပျူတာသည်အဘယ်မှာရှိတိုင်းပြည်ကိုရွေးပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ယခုအချိန်တွင်, နိုင်ငံများစာရင်းတွင်အလွန်ကန့်သတ်သည်။
Method ကို 4: Microsoft က Edge များအတွက်တစ်ဦးက proxy ကို
မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှအသစ်သော browser ၏အသင်းဝင်များသာ proxy ကို server များပေါ်တွင်အားကိုးနိုငျသညျ, ဒါဘရောက်ဇာများအတွက်အသုံးပြုသူ IP ကိုပြောင်းလဲမှုကို Mozilla ကအလားတူဆင်တူဖြစ်လာသည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပုံပေါ်သည်:
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်လတ်ဆတ်တဲ့ proxy ကိုဒေတာများကိုဆိုဒ်များကိုရှာပါ။ သငျသညျဤကဲ့သို့သောကို Google Search Box မှာ, ဒါမှမဟုတ် Yandex အတွက်မောင်းနှင်အားဖြင့်ဒီအလုပျနိုငျ "လတ်ဆတ်တဲ့ Proxy".
အခုအထက်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့အစက်သုံးစက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ drop-down list ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Options ကို"ဒါကြောင့်စာရင်းကို၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီးသော။
သငျသညျ header ကိုအပေါ်ထိ မိ. လဲသည်အထိသည်အထိအောက်ကိုဆင်း "အဆင့်မြင့် Settings" ကို။ ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ "ပိုပြီးရွေးချယ်စရာ»ကိုကြည့်ပါ.
ခေါင်းစဉ် Dolistayte "Proxy Settings"။ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း proxy setting ကို".
သင်တစ်ဦးခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေရှိသည်ဘယ်မှာတစ်ဦးကဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ် "လက်စွဲစာအုပ် Setup ကို Proxy"။ ကြောင်းအောက်တွင်တစ်ဦး parameter သည်ဖြစ်ပါသည် "တစ်ဦးကို proxy server ကိုသုံးပါ"။ ပေါ်မှာလှည့်။
အခုတော့ proxy ကိုစာရင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်ရှိရာ site ကိုမှသွားနှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသောအူမကြီးဖို့အားလုံးကို Chila copy "လိပ်စာ".
လယ်ပြင်၌ "ဆိပ်ကမ်း" သင်အူမကြီးအပြီးလာမယ့်နံပါတ်များကူးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ setting ကိုနှိပ်ပါဖြည့်စွက်ရန် "Save".
Method ကို 5: Internet Explorer ကိုအတွက် Proxy Settings
အဆိုပါပြီးသား obsolescent က Internet Explorer အတွက်, သင်သာ proxy ကိုအားဖြင့် IP ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ကို configure ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ညွှန်ကြားချက်များ:
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင် proxy ကိုဒေတာနှင့်အတူဆိုဒ်များနေရာချထား။ သငျသညျကိုရှာဖွေရန်စုံစမ်းမှုကိုသုံးနိုင်သည် "လတ်ဆတ်တဲ့ Proxy".
proxy ကိုမှ site တစ်ခုရှာတွေ့ပြီးနောက်ဒေတာချိတ်ဆက်မှုဖွင့်တင်ထားရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ browser ၏အထက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်ရှိ gear icon ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျရှာ drop-menu ကိုသှားဖို့လိုအပျ "ဟုအဆိုပါ browser ကို၏ဂုဏ်သတ္တိများ".
အခုတော့ tab ကိုသွားပါ "Connections ကို".
အဲဒီမှာယူနစ် Locate "ဟုအဆိုပါ LAN Settings များ Configuring"။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ 'LAN Settings'.
setting များကိုအတူတစ်ဦးကပြတင်းပေါက်။ အောက်တွင် "Proxy" စာစောင်ကို "သင်၏ LAN အတွက်တစ်ဦးကို proxy server ကိုသုံးပါ"။ တစ်ဦးကို tick အတူက mark ။
တနည်းကား, သငျသညျ proxy များ၏စာရင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရှိရာက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပါ။ တစ်တန်းအတွင်းရှိအူမကြီးမတိုင်မှီမိတ္တူအရေအတွက်ကို "လိပ်စာ"ထိုအခါအူမကြီးအတွင်းအပြီးအရေအတွက်က "ဆိပ်ကမ်း".
အလေ့အကျင့်ပြပွဲသည်အတိုင်း, IP ကိုလျှပ်တပြက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့် browser မှာ VPN ကိုဖွင့်ထား၏။ ဒါကြောင့်ရန်သူများကိုစ run ဖို့ဖွယ်ရှိသည်အဖြစ်သို့သော်ကစိတ်မချရသတင်းရင်းမြစ်ထံမှ browser မှာ IP ကိုတစ်ဦးအခမဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အစီအစဉ်များနှင့် extension များ download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။